ရန်ကုန် - မန္တလေး ရထားလမ်းပိုင်း အဆင့်မြှင့်တင်ရေး စီမံကိန်းတွင်သုံးမည့် သံလမ်းတန်ချိန် ၂၈ဝ? - Yangon Media Group
ရန်ကုန် – မန္တလေး ရထားလမ်းပိုင်း အဆင့်မြှင့်တင်ရေး စီမံကိန်းတွင်သုံးမည့် သံလမ်းတန်ချိန် ၂၈ဝ?
”သံလမ်းတွေကိုသင်္ဘောနဲ့ ၂၂ ခေါက်နဲ့သယ်ယူမှာဖြစ်ပါ တယ်။အခုသံလမ်းတွေရောက်တာ ဒုတိယအသုတ်ပါ။ နောက်ထပ် သင်္ဘောတွေက တစ်လကိုနှစ် ခေါက်(သို့မဟုတ်)တစ်ခေါက် ရန် ကုန်ကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းင်းကပြောသည်။ လက်ရှိ ရန်ကုန်-မန္တလေး ရထားလမ်းပိုင်းတွင် အရှည် ၃၉ ပေသံချောင်းများကို အသုံးပြု ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ရထားလမ်းပိုင်းအဆင့်မြှင့်တင်မှုစတင်လျှင် ယခု ရောက်ရှိထားသည့်သံလမ်းအသစ်များအား အစားထိုးအသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ သံလမ်းအမျိုးအစား များကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း အမြန်ရထား လမ်းပြေးဆွဲချိန်ကို ကီလို ၁ဝဝ မြန်နှုန်းမြင့်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ပြေးဆွဲ ချိန်နှစ်ဆကွာခြားသွားနိုင်ကြောင်း၊ လက်ရှိ အမြန်ရထားလမ်းပြေး ဆွဲချိန်မှာ ၁၄ နာရီကြာမြင့်ပြီး စီမံကိန်းပြီးစီးသွားပါက ပြေးဆွဲ ချိန် ၈ နာရီသာကြာမည်ဖြစ် ကြောင်း မြန်မာ့မီးရထားမှ သိရ သည်။